Manoloana ny fangatahana avo lenta amin'ny MacBook Pro ho avy, Apple dia miditra amin'ny indostrian'ny orinasa Precision | Avy amin'ny mac aho
Manoloana ny fangatahana avo lenta amin'ny MacBook Pro ho avy, Apple dia nanao sonia ny indostrian'ny orinasa Luxshare Precision
Manuel Alonso | | tsaho
Tamin'ny fiandohan'ny volana jolay dia nisy vaovao nivoaka momba an'i Apple Nitady mpamatsy hafa aho ho an'ny fampisehoana mini-LED. Apple dia manana olana amin'ny famatsiana ny efijery an'ity karazana ity ho an'ny iPad Pro 12,9-inch ankehitriny, fa indrindra ho an'ny efijery an'ny MacBook Pro manaraka. Izany no nahatonga ny orinasa hitady mpamatsy fanampiny sy nahita orinasa indostrialy Luxshare.
Apple dia manantena fitakiana lehibe ho an'ny MacBook Pros manaraka, ary noho izany, noho ny tsy fahampian'ny loharanom-pahalalana hahafahana mamokatra efijery Mini-LED ho an'ny fitaovany rehetra dia nanangona mpamatsy fanampiny an'io karazana efijery io izy. Apple dia miomana amin'ny fangatahana goavambe ho an'ny MacBook Pros 14-inch sy 16-inch ho avy. Noho io antony io, raha ny tsiliantsofina re, dia nanakarama mpamatsy faharoa izy amin'ny efijery mini-LED izay hapetraka ao amin'ireo terminal ireo, Araka ny DigiTimes.
Nanampy i Apple Orinasa indostrialy Luxshare ho mpamatsy teknolojia avo lenta faharoa (SMT) faharoa lehibe indrindra ho an'ny fampisehoana mini-LED. Amin'izao fotoana izao dia ny SMT, na Taiwan Surface Mounting Technology ihany no manohana azy, ho mpamatsy azy amin'ny fizotran'ny SMT amin'ny mini-LED iPad Pro 12.9-inch sy ny MacBook Pros ho avy.
Ny MacBook Pros manaraka dia mety ho be fangatahana betsaka noho ny fiasa sy fanovana efa nandrasana hatry ny ela. Mazava ho azy, hanana taranaka vaovao Apple Silicon isika miaraka amina puce vaovao mahery vaika kokoa sy mahomby kokoa. Saingy antenaina ihany koa izy ireo miaraka amin'ny famolavolana endrika lehibe sy lehibe: sisiny fisaka, fanafoanana ny bara fitendry sy seranan-tsambo fanampiny. Hiteraka fangatahana mafy izany ary Apple dia tsy maniry zavatra mitovy aminy tahaka ny amin'ny iPad Pro. Ny fangatahana mafy sy ny tsy fahampian'ny vokatra noho ny tsy fahampian'ny singa.
Apple dia miomana amin'ny ho avy akaiky indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Manoloana ny fangatahana avo lenta amin'ny MacBook Pro ho avy, Apple dia nanao sonia ny indostrian'ny orinasa Luxshare Precision
Apple dia afaka nanamboatra ny bateriny manokana ho an'ny Apple Car ankoatry ny hafa